Neymar Jr Oo SADDEXLEY Ku Jabiyey Rikoodhkii Gool Dhalinta
Haweenka oo 5-xubnood laga siiyay 90-ka Xildhibaan ee
Kouadio Konan Bertin, the opponent who wanted an active vote
By Abdiwahab Ahmed	 On Oct 14, 2020
Neymar ayaa ka dul-tallaabsaday rikoodhkii gool-dhalinta halyeygii Brazil ee Ronaldo Nazario, kaddib markii uu saddexlay cajiib ah ka dhaliyey xulka qaranka Peru oo ciyaar dhamaatay saaka waaberigii ay ku garaaceen 4-1.
Riyad Mahrez Oo Xidhiidh Jacayl La Bilaabay Xiddigtii Uu
Xiddiga PSG ayaa qaybtii hore ku furtay gool-dhalinta rikoodhe uu xulkiisa hoggaanka ugu dhiibay, isla markaana ku qasbay inay dib ugu fadhiistaan kuraastooda reer Peru oo joogay caasimaddooda Peru oo u dagaallamayay inay guuleystaan si ay ugu soo bixi karaan koobka adduunka ee 2022 lagu qaban doono waddanka Qatar.
Ciyaarta oo sii dhamaanaysa ayuu Neymar goolkiisa saddexaad ee ciyaarta dhaliyey, waxaana mid ka mid ah goolashiisa uu kubadda kasoo qaatay goolkiisa agteeda, waxaanu laba ciyaartoy oo Peru ah kusoo derderay badhtamaha garoonka ka hor intii aanu xerada ganaaxa la imanin kubadda oo aanu si fudud u dhaafin laba difaac iyo goolhayaha oo hortiisa taagnaa oo uu dhinac ka beegsaday.
28 jirkan ayaa saddexlaydani waxa goolasha uu waddankiisa u dhaliyey ay ka dhigayaan 64 gool oo ku qaatay 103 ciyaarood, waxaanu sidaa ku noqday ciyaartoyga labaad ee waddankiisa ugu goolasha badan, waxaana kaliya ka horreeya Pele oo dhaliyey 77 gool.
Ronaldo oo Brazil u ciyaaray 98 ciyaarood ayaa kaalinta labaad hore ugu haysan jiray 62 gool oo uu u dhaliyey 17 sannadood oo uu ka mid ahaa qarankiisa oo uu kula guuleystay laba koob adduun oo mid ka mid ah uu kaydka fadhiyey iyadoon la ciyaarsiinin, laba Copa America iyo Confederations Cup.
Halyeygii goolka Brazil ee Taffarel ayaa rumaysan in Neymar uu yahay xiddig ku hoggaamin karaya inay markii lixaad ku guuleystaan Koobka Adduunka, ayna iska maydhaan ceebtii kasoo gaadhay koobkii lagu qabtay waddankooda 2014kii ee Jarmalku sida xun ugu karbaashay.
“Neymar waa ciyaartoy wanaagsan oo si qurux badan u ciyaara. Waa ciyaartoy goysmadiisu layaab tahay, goolasha sameeya, kuwo qurux badanna dhaliye.” Ayuu yidhi Taffarel.
Abdiwahab Ahmed 261 posts
Riyad Mahrez Oo Xidhiidh Jacayl La…
Qaybo badan oo kamid ah Dalka waxaa ka…